Kulan Muqdisho ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo odaayaasha xildhibaanada beesha H/gidir – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kulan Muqdisho ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo odaayaasha xildhibaanada beesha H/gidir
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo kulan muddo labo saacadood ah socday oo ay odayaasha iyo xildhibaanada labada gole ee beesha H/gidir magaalada Muqdisho kula yeesheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa sheegaya inuu kusoo dhamaaday mid is-faham ah.
Kulankaasi ayaa la sheegayaa in uljeedkiisu uu ahaa dalab ay beesha H/Gidir kaga dalbaneeysay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo inuu xilka ra’iisul wasaaraha usoo magacaabo qof beeshooda kasoo jeeda.
Odayaasha iyo xildhibaanada beesha H/gidir ayaa u sheegay madaxweyne Farmaajo inay haatan iyaga xaq u leeyihiin xilkaan, maadaama muddo dheer ay heysatay beesha Abgaal, islamarkaana ay leeyihiin shaqsiyaad aqoon iyo karti u leh oo isbedelka ka qeyb qaadan kara.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegayaa inuu soo dhaweeyay taladda odayaasha iyo xildhibaanada labada gole ee beesha H/gidir, wuxuuna u sharaxay tilmaamaha qofka uu doonayo inuu xilka ra’iisul wasaaraha u magacaabo.
Wuxuu madaxweyne Farmaajo u sheegay in qofkaasi uu ka doonayo inuu noqdo mid qaran, balse aanu doonayn inuu magacaabo shaqsi beesha uu kasoo jeedo kaliya wax ku kordhinaayo, loona baahan yahay shaqsi aanay qabyaalad madaxa uga jirin.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa caddeeyay in qofku beeshii uu doonayo ka noqon karo beelaha laga magacaabayo xilka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, laakiin tilmaamihiisa ay ka mid yihiin inuusan qabiil iyo qabyaalad ku shaqeeynin.
Ugu dambeyntii, odayaasha iyo xildhibaanada labada gole ee beesha H/gidir ayaa madaxweyne Farmaajo ka codsaday in xabsiga guriga ah laga sii daayo Sheekh Xasan Daahir Aweys, wuxuuna madaxweynaha ku jawaabay in arrintaasi uu dib ugu dhigan doonno kulamada dambe iyo markii lasoo dhiso xukuumadda cusub ee Soomaaliya.